တောင်ငူသား: တန်းမဝင်လို့ လမ်းတင် လွှတ်ရတယ်
Posted by Taungoo at 1:57 AM
ဒီပို့စ်လေးအတွက် တို့ ပထမဆုံး စာမူခ ပေးလိုက်ပြီနော်။
ဒီလောက်အရေးကောင်းတာ ဘယ်လိုလုပ် ပလုံ ပလုံ သံကြားရမှာလဲ။ အမဆို သိကတည်းက အမြဲ လာအားပေးတယ်။ ဆက်ရေးပါ။ ဒီလိုပဲ တယောက်နဲ့တယောက် အားပေးရင်း ရေးရတာပါပဲ။ ဘယ်သူမှ တော်လို့ တတ်လို့ရယ်မဟုတ်၊ ၀ါသနာပါလို့ ဒီချစ်စရာ ဘလော့ဂ် အသိုင်းအ၀ိုင်းလေးထဲ ၀င်လာကြတာပါ။ စာမူခပေးတော့လဲ bonus ပေးသလို ၀မ်းသာရတာမျိုးပါ မောင်လေးရေ..။
ကျနော်တို့ ဘလော့ဂ်အကြောင်းလေးကို ပြောပြဦးမယ်..
ဘလော့ဂ်ရေးတော့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်လောက် စပြီး စုရေးကြတယ်.... အခြားလူတွေ လာဖတ်တာ နည်းကြတယ်....ခြောက်ကပ်ကပ်ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ခင်တွယ်တော့ ဖတ်သူမရှိလည်း ရေးတာပါပဲ။ အတူရေးနေကျ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်လောက်ပဲ အချင်းချင်း ပတ်ပြီး အားပေးရတာပါ။ အခုတော့လည်း လူခင်တာများလာတော့ ပျော်ရတာပေါ့ဗျာ...
- ကိုတောင်ငူဘလော့ဂ်ကို အားပေးစကားပြောမသွားဘဲ ဖတ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိကြမှာပါ။
- အဓိကကတော့ မိမိဖန်တီးထားတာကို မိမိကိုယ်တိုင် ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် လုပ်ရကိုင်ရတာ တန်တယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်မိပါတယ်။
ပြုံးမိပါက တောင်ငူသား ပျော်ပါသည်။
ရယ်မောမိပါက တောင်ငူသား ဝမ်းသာရပါသည်။''
စာဖတ်ပြီး ပြုံးလဲပြုံး ရယ်လဲရယ် သွားပြီမို့ ပျော်လဲပျော် ဝမ်းလဲသာပါတော့။ :))
စာတွေရှည်တော့ ဖတ်ရတာ အားရပါးရရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ အမြဲအားပေးနေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆက်ဘလော့ဂ်ကြတာပေါ့ နှော။
တန်းဝင်လို့ ဘလော့ဂ်ပေါ်ရောက်လာရင်တော့ အားပေးနေအုံးမှာပါ။
စာကောင်းလေးတွေ ရှိတတ်တဲ့ နေရာလို့ မှတ်သားထားပြီး လာလာဖတ်တတ်ပါတယ်။ စာမူခလည်း တတ်နိုင်သမျှ သတိထားပြီး ပေးသွားတတ်ပါတယ်။ အမြဲတစေတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
စာမူခ ပေးရတာက လက်ဝင်ပါတယ်။ ပြီးပြီးရော မပေးချင်ရင် သာတောင် ဆိုးသေး။ သေသေချာချာ ဖတ်ရတယ်၊ စဉ်းစားရတယ်လေ။ တချို့က အဲလောက် အချိန် မပေးနိုင်ကြဘူး။ အကြောင်းကြောင်းပေါ့။
တချို့က ဘာရေးရေး ရွှေဖြစ်နေတယ် (ဥပမာ မမိုးချိုသင်း)။ တချို့က ချစ်မွှေး ပါတယ် (ဥပမာ မခင်ဦးမေ)။ တချို့က အကြောင်းအရာရော အပြင်အဆင်ပါ စုံလင်မြိုင်ဆိုင်တယ် (ဥပမာ ၀ီရှီမီ)။ တချို့က ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထဲထဲဝင်ဝင် ရေးတယ် (ဥပမာ မသက်ဇင်)။ တခြား ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ (ဥပမာ ညီလင်းဆက်၊ ပန်ဒိုရာ၊ မမေငြိမ်း၊ နိုင်းနိုင်းစနေ၊ ကလိုစေးထူး၊ အိုးဝေ၊ ဒီကိုလာ၊ ဂျစ်တူး စသည်စသည်) အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကို အားကျပေမယ့် စာမူခ ရတာနည်းလို့ စာ(ဘလော့ဂ်)မရေးပဲ နေမလား ဆိုတော့ရော နေနိုင်လို့လား။ (ကျမကတော့ မနေနိုင်ပါ)
ပရိသတ် အမျိုးမျိုးဆိုတော့ အကြိုက်ကလည်း အထွေထွေ ရှိသေးတာ။ ကိုယ်ကြိုက်ပေမယ့် သူများ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာပေါ့။ သူ့ရွေးချယ်ခွင့်ပဲလေ။
ကျမရဲ့အမြင်ကတော့ ကိုယ့်စာကို ကိုယ်အလေးထားပြီး၊ ကိုယ်ရေးတာကို ကိုယ် သတိရှိ၊ အရည်အသွေး မှတ်ကျောက်တင်နေသမျှ
ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ရဲ့ သီးခြားဖြစ်မှု Identity လေး ခိုင်မြဲနေမှာပါပဲ။ ကျန်တာကို အချိန်က ဆုံးဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘလော့ဂ်ဟာ ဘ၀ မဟုတ်ပါဘူး။
''Being good enough'' is good enough, don't you think?
စာမူခ မပေးတိုင်း ရေးဖို့ အားမလျော့သင့်ပါဘူးဗျာ။
အနော်ဆို အမြဲ လာလာ ဖတ်တယ်။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ စာတွေ ရေးနိုင်တာကိုပဲ မကျေနပ်သေးဘူးလားဗျ။ အဓိက က ဖတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စာ၊ အတွေးအမြင်လေးတွေ ကျန်နေဖို့ပဲ ထင်တယ်။ ပလုံ ပလုံ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
စာတော်တော်များများကို ကြိုက်ပေမယ့် စာမူခပေးဖို့ အချိန်မရဘူးဗျ။ အနော့်မှာ ဖတ်ချင်လွန်းလို့သာ ခဏ နားချိန်မှာ မနားပဲ လာလာ ဖတ်ရတာဗျ။
အနော့်လို လူတွေ များနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ပို့စ် က စာများတော့ ဘာဖြစ်လဲဗျ။ ပညာရှင် လက်ရာမှီချင်ရင် ကျမ်းစာရေးပေါ့။ ဟွန်း....။ ပြော ပြောချင်ဘူး။ ။ စာမူခ ပေးတာများ လွယ်တယ်မှတ်လို့။ ။
ရေးတဲ့သူတင် မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်တဲ့လူလည်း ကိုတောင်ငူ အသစ်တင်လောက်ပြီ မှတ်ပြီး လာလာကြည့်ရတာဗျ။ ။
ပြုံးလည်းပြုံး ရီလည်းရီချင် စိတ်လည်း တိုတယ်ဗျို့။ ။
ကျမဆိုအသစ်တင်တဲ့ Blog တိုင်းသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ၊ စာဖတ်ဝါသနာအရမ်းပါလြို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ စာမူခ ပေးခဲတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကကောင်းလွန်းနေတော့ သူ့စာတွေနဲ့ မှီအောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲ မသိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်Blog ကလည်း ပြန်လာလည်ရင် ဘာမှထူးထူးခြားခြား မရှိတော့ အားငယ်လို့ ။ ဒီလိုပါပဲ ကိုတောင်ငူသားစီ လည်း အမြဲရောက်ပါတယ် ။ နောက်ဆို ကြိုးစားပြီး စာမူခတွေ လိုက်ပေးတော့မယ် ။ Blog တော့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့နော် ။ :)
ကိုတောင်ငူရေ အကျီစားသန်က ရန်များ၏တဲ့။ စေတနာက ဝေဒနာတွေ ဖြစ်သွားမှာတော့ မလိုလားဘူးဗျာ။ ကိုက စလိုက်နောက်လိုက်ပေ မယ့် တိုက်ဆိုင်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ကာယကံ ရှင်တွေရဲ့ ဘက်ကိုလည်း နဲနဲလေး ပြန်တွေးပေးဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြီးပြီးရောရေးတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို တော်တော်အမြင်ကပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုပြောထားတဲ့ "တားတားနားပါဦမယ်" ဆိုတဲ့ပို့စ်မျိုးမှာ ကွန်မန့် ၂၀ ကျော်ရဖို့ သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းဝင်ဆန့်မှုနဲ့ အဲလိုဝင်ဆန့်ဖို့ အတွက် ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလ တွေကိုတော့ အနဲဆုံးထည့်သွင်း စဉ်းစားပေး ဖို့လိုမယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆမိပါတယ်။
စာကောင်းစာသန့်တွေကိုချည်း ဦးစားပေးရေးသားပြီး စာဖတ်သူကို တကယ်ရစေချင်တဲ့ ကိုတောင်ငူရဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပြီး အောင်မြင်တဲ့ (ကွန်မန့်များများရတဲ့) ဘလော့ဂါတစ်ယောက် အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
ကိုတောင်ငူသားရေ.. ကျွန်တော်က အပြောအဆို မတတ်လို့ အပြော မကောင်းလို့ ကော့မန့်တွေကို လက်ရှောင်တာပါ။ စာတွေကိုတော့ ဖတ်ပါတယ်။ လူကလည်း ခက်တာပဲ။ ဘလိုင်းကြီးလည်း မချီးကျူးတတ်။ အရမ်း ကြိုက်နေတောင် တစ်လုံးတစ်လေ မပြောလိုက်ဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့် ပြောလိုက်မှ တလွဲ ဖြစ်သွားမှာလည်း ကြောက်တယ်လေ။ နောက်ပြီး တကယ်လည်း မအားလို့ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သားသမီးတွေ မျက်နှာနဲ့ ကော့်မန့်တွေ ရတယ် အဟီး။ ကော်မန့် များချင်ရင် သားသမီး များများ မွေးလို့ ကြုံနေရတာနဲ့ လာအကြံပေး သွားတယ်ဗျာ။ ပျော်စေ ခင်စေပေါ့။
ကော်မန့်တက်ဖို့ ကော်မန့်ထဲမှာ ကော်မန့်ပေးသွားပါတယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ ကော်မန့်ပေးရမဲ့ ခလုပ်ကို ပို့စ်အောက်ဆုံးကို ပို့ထားသင့်တယ်ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာတွေက စာကို အောက်ကနေစဖတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ စာဖတ်ပြီးတော့ ကော်မန့်ရေးချင်စိတ်လေးပေါက်တုန်း အလွယ်တကူတွေ့သွားနိုင်အောင် လုပ်ထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ။ အရှည်ကြီးလဲ ဖတ်ပြီးရော ကော်မန့်လေးရေးချင်လို့ ဘယ်နား ကလစ်ရမှန်းမသိဘူး လိုက်ရှာနေရရင် စာမှုခမြက်မြက်လေးရမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ဆရာလုပ်တယ်မထင်နဲ့နော်။ အမှန်တော့ ဆြာလုပ်တာပါ။
comment ဆိုတာက ပေးချင်သလို ပေးလို့ မရသလိုပဲ။ တခါတလေ ရေးထားတာ ပြည့်စုံနေတော့ ဘာရေးရမှန်းကို မသိဘူး။
စာကြီးပေကြီး စာလေးလေးတွေမှာ comment သိပ်မရတတ်ပါဘူး။ လူတွေက မြင်းထိန်း ငတာ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။
တခါတလေကျတော့ ကိုယ်က ဘာမှ မသိတဲ့အကြောင်းတွေ ဆိုတော့ ထိုင်ဖတ်ရုံက လွဲပြီး ဘာမှ ပြန်မရေးနိုင်ဘူး။ သူများပြောမှ သိရတဲ့ ဘ၀တွေကိုး။
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ပို့စ်ထဲမှာ အငြင်းပွါးစရာလေးတွေ ရှိရင် ဖြစ်စေ... အမြင်တွေ ဖလှယ်တာ ဖြစ်စေ... အဲဒီလိုလေးတွေ ရှိနေတဲ့ အခါတွေမှာ Commentတွေ များတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးထားတဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလို စာတွေမှာလည်း Comment ရတတ်ပါတယ်။
သိပ်ပြီး စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း comment များတဲ့ အထဲမှာ တန်းမ၀င်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပဲ ကိုယ်ရေးချင်တာ ကိုယ်ရေးနေရင် ပြီးတာပဲလေ။
တောင်ငူသားရေ...အမ ဆံပင်တွေက အရမ်းကောက်သလို အမ စိတ်ကလည်း အရမ်းကောက်တတ်တယ်သိလား...ရေးနေရင်းကို ရပ်ရတော့မလားလို့ blog ကိုတောင် ကောက်သေး...ပြန်ချော့ရတာပေါ့လေ... Experience is what you get when you do not get what you want. (Anonymous) blog မှာ Theme of Sonata-Cantata ဆိုပြီးကို တင်ထားလိုက်တယ်
ိုတောင်ငူသားရေ .. စာမူခ လာပေးတာ နောက်ကျသွားတယ်။ အသစ်တင်တိုင်း အမြဲလာ ဖတ်ပါတယ်။ အမြဲအားပေး လျှက်ပါ။
ကဲရော့ဗျာ စာမူခ နောက်လဲ ဆက်ရေးပါဦး